काठमाण्डौ । ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताका लागि एउटा नराम्रो खबर छ। यदि तपाइँ आफ्नो आइफोनमा पुरानो आईओएस भर्जन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब ह्वाट्सएपले काम गर्ने छैन। कम्पनीले नयाँ सपोर्ट अपडेटको घोषणा गरेको छ। योसँगै पुराना आईओएस भर्जनहरुमा यसको अपडेट यस वर्षको अन्त्यसम्ममा समाप्त हुनेछ। ह्वाट्सएपले आईओएस १० र आईओएस ११ मा सपोर्ट बन्द...
काठमाण्डौ । भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबमा कयौँ नयाँ फिचरहरु थपिएका छन्। कम्पनीले यी नयाँ फिचरहरु मोबाइल एप र वेभ प्लेयर दुवै भर्जनमा समावेश गरेको छ। नयाँ फिचरअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले मस्ट रिप्लेड, भिडियो च्याप्टरजस्ता अप्सनहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसमा मस्ट रिप्लेड फिचर सबैभन्दा विशेष छ। युट्युबको यो नयाँ फिचरले ...
काठमाण्डौ । इन्स्टाग्राम रिल्स निकै लोकप्रिय छ। यही लोकप्रियताको फाइदा उठाउन मेटाले फेसबुकमा यो छोटो भिडियो फिचर पनि थपेको छ। अब फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई मासिक करिब ५ लाख रुपैयाँ कमाउने मौका दिएको छ। यसका लागि प्रयोगकर्ता (क्रिएटर्स)ले ओरिजिनल कन्टेन्ट बनाउनुपर्नेछ। कम्पनीले फेसबुकमा च्यालेन्ज ल्याएको छ। यसबाट क्रिएटर्सले रिल्स...
फेसबुकले हटाउँदैछ यी दुई फिचर, प्रयोगकर्तालाई कस्तो पर्नेछ असर ?
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना दुईवटा फिचरहरु बन्द गर्ने भएको छ। फेसबुकले लोकेसन बेस्ड फिचर नियर फ्रेन्डस् एन्ड वेदर अलर्टस् बन्द गर्न लागेको हो। नियर फ्रेन्ड्सबाट प्रयोगकर्ताले फेसबुक साथीहरुको स्थान ट्रयाक र सेअर गर्न सक्छन्। फेसबुकले बन्द गरिरहेको अर्को फिचर भनेको वेदर अलर्टस सुविधा हो। यसबाट प्रयोगकर्तालाई मौसमको...
काठमाण्डौ । भिभो सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा चीनको स्मार्टफोन बजारमा पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ। काउन्टर–प्वइन्ट रिसर्चको मासिक मार्केट पल्स सर्भिसका अनुसार समीक्षा अवधिमा चीनको स्मार्टफोन बजारमा आएको गिरावटलाई ध्यानमा राख्दै २० प्रतिशत बजार हिस्साका साथ भिभोले पहिलो स्थान ओगटेको हो। यस त्रैमासिक अवधिमा भिभोको भी र वाई...
भिभो वाई३३एसले टेक्नोलोजिकल र डिजाइन ड्रिभन इनोभेसनलाई पुनः परिभाषित गर्दै
काठमाण्डौ । भिभोले हालै नेपालमा ५००० एमएएच ब्याट्री लाइफ, शक्तिशाली क्यामेरा प्रणाली र विशाल मेमोरी विस्तार सेटअपसहित वाई३३एस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। युवा र प्रविधि उत्साही प्रयोगकर्ताहरुका लागि यस स्मार्टफोनमा उल्लेखनीय विशेषताहरु रहेका छन्। भिभोका वाई सिरिजका स्मार्टफोनहरु सुलभ मूल्य दायरामा उपलब्ध उत्कृष्ट...
काठमाण्डौ । हालै टेस्ला कम्पनीका मालिक एलन मस्कले ट्विटर किन्न ४३ बिलियन डलर प्रस्ताव गरेका थिए। यस विषयमा निकै विवाद भएको थियो। तर, नयाँ रिपोर्टका अनुसार ट्विटरले मस्कसँग यो सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘यसको मतलब ट्विटरले मस्कको ५४.२० प्रतिसेयर सम्झौता स्वीकार गर्नेछ भन्ने होइन। कम्पनीले यसका लागि मस्कसँग...
काठमाण्डौ । गुगल क्रोम एउटा निकै लोकप्रिय इन्टरनेट ब्राउजर हो। यसका विश्वभर अर्बौं प्रयोगकर्ता छन्। हालै गुगलले क्रोम प्रयोगकर्ताका लागि चेतावनी जारी गरेको छ। गुगल क्रोममा एउटा नयाँ त्रुटि फेला परेको छ। जसका कारण गुगल क्रोमका ३२ करोड प्रयोगकर्ता खतरामा परेका छन्। गुगल क्रोममा नयाँ जिरो–डे हाई थ्रेट लेभल ह्याक भएको पाइएको छ। यो...
काठमाण्डौ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले मी नोटबुक २०२१ सिरिज र रेड्मीबुक सिरिज नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रयोगकर्ताको उत्पादकता बढाउन समर्पित, अतुलनीय स्पिड, पर्फमेन्स र मिडिया अनुभव प्रदान गर्ने मी नोटबुक अल्ट्रा र मी नोटबुक प्रो सरल डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी डिजाइन गरिएको छ। आधुनिक डिजाइन, बलियो र...
गुगलको यो फिचर भयो गायब, अब एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाण्डौ । गुगलले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट एउटा फिचर हटाएको छ। सन् २०१८ मा ल्याइएको गुगल स्न्यापसट फिचर हटाइएको हो। नाइन टु फाइभ गुगलका अनुसार गुगलले अन्ततः यो फिचर हटाएको छ। एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा दिइएको यो फिचर निकै कामको थियो। तर, धेरै कम मानिसलाई यसका बारेमा थाहा थियो । यो सुविधा प्रयोगकर्ताको गुगल असिस्टेन्ट स्क्रिनमा...
न्यू इयर इभमा इसेवाको बम्पर अफर: स्क्यान टू पे गर्दा सतप्रतिशत क्यासब्याक
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवामार्फत चैत ३० गते बुधवार न्यू इयर इभका दिनमा स्क्यान टु पेमार्फत भुक्तानी गर्दा शत्प्रतिशत क्यासब्याक पाइने भएको छ । सोही दिन इसेवाको मोबाईल एप्स्मार्फत फोनपे नेटवर्कमा स्क्यान टु पे गर्दा सय जनाले अधिकतम रु. २०७९ सम्म शतप्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् । साथै न्यू इयर इभका दिनमा...
आफ्ना २० करोड प्रयोगकर्तालाई झट्का दिँदै ट्विटर, अब यो सेवामा शुल्क लाग्ने
काठमाण्डौ । ट्विटरले विश्वभरका आफ्ना २० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई झट्का दिने तयारी गरेको छ। रिपोर्टहरुका अनुसार ट्विटरको ट्विटडेक अब निःशुल्क हुने छैन। ट्विटडेकको नयाँ भर्जन ट्विट ब्लु सर्भिसको हिस्सा हुनेछ। रिभर्स इन्जिनियरिङ एक्सपर्ट जेन मनचुव वोंगले ट्विटरले ट्विटडेकलाई शुल्कमा आधारित (पेमेन्ट बेस्ड सर्भिस) सेवाका...